Mashruuca somcable iyo faa,iidada uu u leeyahay gobolka Daad- Madheedh (OODWAYNE).
Tuesday March 12, 2019 - 20:31:13 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Qormo qoraalkan waxaynu ku lafa-guri doonaa arimo dhowr ah oo ay ugu muc iyo miisaan wayn yihiin adeega ay bixiso shirkada wadaniga ah ee Somcable iyo arimo dhowra oo ku saabsan deegaanada uu maro xadhiga internetka ee loo yaqaan (FIBER OPTIC).
Ugu horeyn Adduunka marka shirkad la aas-aasayo, waxa loo sameeyaa ujeedooyin iyo himilooyin ay higsato, hana-qaadka shirkadaasina waxa uu ku xidhan-yahay qaabka ay u raacdo waddada toosan ee samaysatay.
Haddaba Shirkada Somcable oo saaxada suuqa ku jirtay muddo ka yar 10sano waxay ku ay ku talaabsato hormar aad u baaxad wayn oo ay ku kasbatay macaamiisheeda kala duwan. Maalgashiga waddanka ee shirkadda Somcable: Shirkadda MSG oo uu Chairman ka yahay ganacsade Maxamed Aw Saciid waxay waddanka ka samaysay maalgashigii ugu badnaa ee waddanka ganacsade hal-mar galiyo ganacsigiisa kaasi oo ah addeega internetka (FIBER OPTIC) oo ah internetka xawaarihiisu sareeyo. Xadhkihiisana lasoo jeexay Illaa badda cas iyo inta laga soo gaadhayo qaarbadan oo ka mid ah magaalooyinka waawayn ee Somaliland. Maalagashigani waxa uu abuuray in dhalinti wadanku ka helaan fursado shaqo oo ay ka shaqaystaan. Hirgalinta mashruucan waxa ku baxay dhaqaale gaadhaya malaayin dollar . Taasoo wadanka u leh faa,iido wax ku oola, hadaba soo gaadhinta uu ina soo gaadhay
xadhigan (FIBER OPTIC) waxa inoo fudadaatay sidii aynu ula jaanqaadi lahayn caalamka intiisa kale. Hadaba ganacsadahani waxa uu aaminay in waxaas oo hantiya uu galiyo dalkiisa hooyo. Waxay ka bulsho ahaan inagu tahay ceeb ah in hantida intaas leeg maalinba meel ka dhaawacno madaama xadhiga somcable dhowr goor waxyeelo loo gaystay taasina waxay horseed u noqon karta in shirkadaha waawayn ee caalamka ee rabbay in ay wadankeena maalgashadaan ay dib u istaagaan kana taxadiraan in ay hantidooda ku maalgaliyaan Somaliland. Haddaba xaqiiqdii halka uu ganacsade maxamed aw siciid uga jiro qarankan Somaliland ma ah mid ay garan karaan dadka hab fikirkoodu hooseeyo anba garaadkoodu liito balse dadka sida quman wax u cabiri karaa way garan karaaan muga iyo miisaanka uu Ina-Aw Siciid ku leeyahay qaranka Somaliland. Wakhtigan hadda la joogo oo ay dunidu ku talaabsatay hormar iyo koboc dhaqaale oo ubaaxad wayn.
waxa saldhig u ah hormarinta laga gaadhay dhinaca teknoolajiyada casriga ah. Haddaba intii ay shirkada somcable jirtay waxa fududaatey in aynu la jaan-qaadi karno caalamka intiisa kale taasoo ardey aad u tiro baddan ay ka faa,iideen adeegan ay bixiso shirkada somcable. Madaama khadkan internetku u fududeeyay in ardeydu wax ka dhigan karaan jaamacadaha dibada ah. Adeegan somcable waxa iyaguna aaad ugu faa,iidey ganacsatadii oo helay macluumaad iyo xogo oo la xidhiidha suuqyada badeecadaha lagu gado anba laga gato sida suuqyada saamiyada
Adeega shirkada somcable ee ay gaadhsiinayso gobolka Daad-
Waxa waayadan dambe ka dhacayay gobolka Daadmadheedh arimo aad u fool-xun taas oo waxyeelo aad u wayn loogu gaystay xadhiga somcable ee mara deeganada hoos imaada gobolka daadmadheedh. Dhacdooyinka oo soo noq-noqday waxay amakaag iyo fajiciso ku noqotay
dhamaan bulshada reer Somaliland. Mawduucan u jeedka ugu wayn ee uu xambaarsan yahay waxay weeyi in bulshada deegaanadaas u i ftiimiyo faa,iidada ay ka heli doonaan adeega internetka ee ay bixiso shirkada somcable. Ugu horeyn shirkada somcable waa haayad ganacsi oo loo aas-aasey in ay bulshada u faaideyso iyadoo ka haqab-tiri doonta baahiyaha kala duwan ee aynu uqabno dhinaca teknoolijiyada casriga ah. Adeegani marka uu ka hirgalo deegaanada ood-wayne waxa uu ku xidhi doonaa dhamaan gobolada kale ee dalka iyo dhamaan wadamada caalamka. Waxa muuqata in gobolkani uu ka dib dhac dhinaca hormarka. taas oo ay ugu wacan tahay dadkeeda oo aan u bislaan wax wada qabsiga iyo in ay u midoobaan dantooda. Hadaba waxa lama huraan ay in aynu isku tashano gobolkeenana
ka ilaalino fadqalalooyinka sababay in xadhig internetka somcable dhowr mar la jaro.
Haddaba kuwanina waa qaar kamida faa,iidooyinka ay ka heli doonaan bulshada reer daad- maadheedh adeega internetka ee ay bixiso shirkada somcable.
 Waxbarashada gobolka oo kor u kac samaysa. waxa kordhi doonta ardeyda sanad walba ka baxda dugsiyada gobolka madaama ay helayaan adeeg u saamaxaya in ay wax ka bartaan jaamacado ku yaala meelo ka baxsan dhulkeena hooyo.
 Dhaqaalaha gobolka oo siyaada. Ganacsiga Internetka Waxa laga sameeyay balaayiin dollar isagoo ganacsigiisu noqday kuwa ugu ballaadhan Adduunka Wakhtigan waxaana jira dadyow fara badan iyo shirkado ka sameeyay lacago xad dhaafa. Hadaba Waxa kordhi doontaa helitaanka xogo badan oo ganacsatadeena faa,iido u leh.
 Xidhiidhka aynu la leenahay mandaqa oo siyaada. Madaama aynu ognahay in Caalamkii noqday sidii hal tuulo oo kale isagoo adeega internetku fududeeyey xidhiidhka Adduunka ee dhinaca isgaadhsiinta taasi oo nolosha ibnu aadamka wax badan ka badashay gobolkanina waxa uu heli doonaa meel uu kala xidhiidhi caalamka intiisa kale. Madaama aynu ognahay in waxaas oo faa,iido ah aynu ka heli doono adeega somcable, waxa lagama maarmaan in ay la shaqayno shirkada somcable iskana ilaaliyo waxkasta oo gobolka ku keenaya sumcad xumo. Waxa waajib inaga saraan ah in laamaha amniga soo ogaysiino cidkasta oo isku dayda in ay waxyeelayso xadhiga somcable anba dibindaabyo ku ah qarankeena.
Hamse Omar Abdillahi